Dhaqanka – Stichting Somalische in Breda
Archive by category "Dhaqanka"
3 Magan-galyodoon oo ku dhintay biyo saddexdii bilood la soo dhaafay
Jul 26,2020 Comments Off on 3 Magan-galyodoon oo ku dhintay biyo saddexdii bilood la soo dhaafay
Hay ada dhexe ee qaabilaad magangalyodoonka Nederland ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan (COA) het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers ayaa walaac ka muujisay ka dib markii saddex magangalyo doon u yimid Nederland oo ku xaraysnaa xeryaha ay hay ada maamusha biyo ay u rabeen in ay ku dabaashaan iyagoo aan dabaal aqoon.
Hay ada ayaa qaylodhaan ku dhufatay soona jeedisay in magangalyo doonka xeryaha ay maamusho ku jira la baro dabaasha si ay naftooda u badbaadiyaan. Hay ada COA iyo hay ado kale oo Nederlandees ah ay iska kaashan doono sidii loo hirgelin lahaa qoraal ku tarjuman luqado kala gedisan oo lagu soo bandhigi doono meelaha u dhow biyo mareenada wabiyada iwm.
Digniinaha ku qorana luqadaha kala gedisan ayay hay adaha iska kaashan doonaan laguna soo bandhigi doono boorar loogu digaayo dadka soo galootiga ah in lagu wargeliyo luqadooda khatarta ay leedahay in wabiyada iyo biyo mareenada wadanka kala gedisan, maadaama Nederland uu yahay wadan leh biyo mareeno wabiyo iyo badba.
Wadamo badan oo dadka magangalyo doonka xeryaha qaxootiga loogu talagalay ayaa badankood ka yimid wadamo aan dabaasha qiimo iyo ahmiyad weeyn aysan lahayn. Luqadaha la sheegay in lagu soo bandhigi doono sida lagu faafiyey warbaahinta Nederland ay kala yihiin Carabi, Ingiriis, Jarmal iyo Boolish.
Luqada afka Soomaaliga lama sheegin in ay ka mid tahay luqadaha Soomaaliga digniinaha khatarta ay leedahay gelida wabiyada,kanaalada iyo badaba iyadoo qofka galaya uusan dabaasha aqoon iyo khataraha kale ee hirarka biyaha ay keeni karaan haddii uusan qofku ka feejignaan.
Xiriir la leh qormadaan:
Xigasho ilaha warka
Baro xarfaha eray bixin.
Magan galyodoon = asielzoeker
Sannandguurada Calanka iyo xorrriyada Soomaaliya
1 Luulyo 2020: JSB: Sanadkii 1960 kii oo ahayd xilligii dalkeena Soomaaliya uu ka xorroobay labadii gumeyste ee kalaa ahaa Talyaani iyo Ingiiriiska, waxaa dhacday in habeenkii calanka la saarayey ay ahayd mar jaceylka iyo qiimaha xorriyadda ay qabeen dadkii Soomaaliyeed mid aan la qiyaasi karin xamaasadooda. Taariikhdu markii ay 26-June-1960.kii waxaa diiwaanka galay Gabaygii caanka noqday ee uu tiriyay Allaha U Nxariistee Abwaan Cabdulaahi Suldaan Timo Cadde magaciisuna ahaa ‘Kaana Siib, Kanna Saar’ oo ula jeeday in la dajiyo calankii Ingiriiska oo la saaro Calanka Soomaaliya; gabeyga oo mirrihiisa.
Kulanka ururada Soomaalida Nederland online ZOOM ku kulmay fiirso/daawo iyagoo xusayo sannadguurada xorriyada markay Soomaaliya xorriyadeeda qaadatay
Gepostet von Fsan Fsan am Mittwoch, 1. Juli 2020
Waa mid mudan in la xusuusto in dad badan oo Soomaaliyeed ay dadaal dheer iyo dhiig u soo daadiyeen sidii dadka iyo dalka Soomaaliya cisada iyo sharaftooda iyo xaqooda u heli lahaayeen. Soomaaliya waa wadan leh baaxad weeyn oo leh khayraadka qaybihiisa kala gedisan oo isugu jira xoolo nool, duurjoog noocyaheeda kala gedisan, haadka duula, halaqa xamaarta, badda ugu dheer qaarada Afrika.
Nasiibdaro dad khani ah oo laga dhaadhiciyey in ay fakhri yihiin hadana aaminsan in ay fakhri yihiin, taasoo xaqiiqda ka fog, laakiin u baahan sidii dadka loo wacyigelin lahaa qaasatan dhalinyarada meelkastooy joogto dalka gudihiisa iyo kuwa dibada ku sugan dhamaantood. Dhalinyarooy dal aan ahayn Soomaaliya ma lihidiin kuwii manaafici lahaana waa idinka gudaha iyo dibada dalka. Waxaad sharaf iyo ciso ku leedihiin dalkiina.
Dhalinyarada dibada u helay nasiibka in ay yimaadaan waxaan kula talin lahaa in ay ku dadaalaan sidii ay aqoontooda u kordhisan lahaayeen qaasatan qaybaha soo socda:-
Dhismaha iyo injineeriyada
Dhakhasahda xoolaha nool
Si aad wax u barato isku day in luqada wadanka aad joogto waa furihii albaab kasta aad ku furan lahayd ama shaqo ama waxbarasho in aad meelsaarto. Dhalinyarada waa in ay iskaashadaan iskana warqabaan oo ay kala warqataan noqdaan xog wadaag.
Dhul aan dhulkaaga hooyo ahayn waa dareen ku joog.
Qoraalka wuu socdaa ……………………………………..
1 Luulyo 2020
Haddii markaad akhrisatay qoraalka su’aal qabto halkaan nagala soo xiriira
Jaaliyada Soomaalida Bareeda
Warkii oo kooban
Somali Foundation of Breda powered by Busiprof